WhatsApp Messenger 2.19.171 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.19.171 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
WhatsApp ကို Messenger ကို Android နဲ့အခြားစမတ်ဖုန်းများအတွက်ရရှိနိုင်မယ့်အခမဲ့ messaging app ဖြစ်ပါတယ်။ WhatsApp ကိုသငျသညျသတငျးကိုစေမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုခေါ်ခြင်း (ရရှိနိုင်သကဲ့သို့, 4G / 3G / 2G / EDGE သို့မဟုတ် Wi-Fi ကို) သင့်ဖုန်းရဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအသုံးပြုသည်။ မက်ဆေ့ခ်ျများ, ကိုခေါ်, ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အသံမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နှင့်လက်ခံရရှိရန် SMS ကိုမှ WhatsApp ကိုမှ switch ။
• NO အခကြေးငွေ: WhatsApp ကို (ရရှိနိုင်သကဲ့သို့, 4G / 3G / 2G / EDGE သို့မဟုတ် Wi-Fi ကို) သင့်ဖုန်းရဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုသည်ကိုသင်သတင်းစကားကြကုန်အံ့နှင့်သင်တိုင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုသို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ပေးဆောင်စရာမလိုဒါ, မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုပဌနာဖို့။ * WhatsApp ကိုအသုံးပွုဖို့မရှိ subscription ကိုအခကြေးငွေရှိပါတယ်။
• Multimedia: ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အသံမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါနှင့်လက်ခံရရှိသည်။
•အခမဲ့ဖုန်းခေါ်: သူတို့တခြားနိုင်ငံမှာရောက်နေလျှင်တောင်မှ WhatsApp ကို Calling မှအခမဲ့အဘို့သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစု Call * WhatsApp ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအစားသင့်ရဲ့ဆယ်လူလာအစီအစဉ်ရဲ့အသံကိုမိနစ်ထက်သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ ။ (မှတ်ချက်: Data ကိုစွဲချက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်အသေးစိတ်ကိုအဘို့သင့်ပံ့ပိုးပေးသူကိုဆက်သွယ်ပါလည်း, သငျသညျ WhatsApp ကိုတဆင့် 911 နှင့်အခြားအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုနံပါတ်များကိုရယူနိုငျပါဘူး။ ။ ) ။
• GROUP CHAT: သင်အလွယ်တကူသင်၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်အတူထိတွေ့နေဖို့နိုင်အောင်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်နှင့်အတူအုပ်စုချတ်ခံစားပါ။
• WhatsApp ဝက်ဘ်ဆိုက်များ: ကိုလည်းသင်ျာသင့်ကွန်ပျူတာ၏ဘရောက်ဇာကနေ WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နှင့်ခံယူနိုင်ပါတယ်။
• NO အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစွဲချက်: နိုင်ငံတကာတွင် WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ရန်မပိုဆောင်းတာဝန်ခံရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ Chat နှင့်နိုင်ငံတကာ SMS ကိုစွဲချက်ကိုရှောင်ကြဉ်။ *
• username နှင့်တံသင်ဖို့မဆိုဘယျကွောငျ့အသေးအခြားအသုံးပြုသူအမည်သို့မဟုတ် PIN ကိုမှတ်မိဖို့ရှိခြင်းနှောငျ့ယှကျ? WhatsApp ကိုဖွင့် SMS ကိုတူ, သင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အလုပ်လုပ်, သင်၏ဖုန်းရဲ့လက်ရှိလိပ်စာစာအုပ်နှင့်အတူချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်။
•အမွဲ Logged IN: WhatsApp ကိုအတူသငျသညျမက်ဆေ့ခ်ျများလက်လွတ်မဒါ, သငျသညျအစဉ်အမြဲရှိ logged ပါတယ်။ သင်၌ logged သို့မဟုတ်ထွက် logged င်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်သူမျှမကပိုရှုပ်ထွေး။
•လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်နှင့် ဆက်စပ်. : သင့်လိပ်စာစာအုပ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ Hard-To-သတိရ username များပေါင်းထည့်ရန်မလိုအပ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့် WhatsApp ကိုရှိတော်မူသောသင်တို့အဆက်အသွယ်ဖြင့်သင်တို့ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အသုံးပြုသည်။
• OFFLINE MESSAGES များ: သင်သည်သင်၏အကြောင်းကြားစာများလက်လွတ်သို့မဟုတ်သင့်ဖုန်းကိုပိတ်လိုက်ရင်တောင် WhatsApp ကိုသင် app ကိုအသုံးပြုလာမည့်အချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်သင့်ရဲ့မကြာသေးခင်ကမက်ဆေ့ခ်ျကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်။
•ပို: မျိုးစုံကိုတစ်ကြိမ်မှာအဆက်အသွယ်များ, နှင့်ပိုပြီးရန်, သင့်တည်နေရာကို Share လဲလှယ်အဆက်အသွယ်များ, သတ်မှတ်ထားထုံးစံနောက်ခံပုံများနှင့်အကြောင်းကြားစာအသံ, အီးမေးလ် Chat history ကိုထုတ်လွှင့်မက်ဆေ့ခ်ျ!
* Data ကိုစွဲချက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတျအဘို့သင့်ပံ့ပိုးပေးသူကိုဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသင်တို့ထံကစကားကိုနားထောငျဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေ! သင်သည်မည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်, မေးခွန်းများကို, ဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကမှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ:
သို့မဟုတ် twitter ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအတိုင်းလိုက်နာ:
ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ပါသည္ 3
apps စတိုး 2.71M 3536.34M
APK ဗားရွင္း 2.19.171
File Size: 35.91MB
Release date: 2019-06-13 19:02:05